Gilthead duban oo leh basal iyo cherry | Cuntooyinka Jikada
Gilthead bream oo la dubay oo leh basal iyo cherry
Maria vazquez | 11/09/2021 10:00 | Cunnooyinka Kalluunka
Kalluun dubay Waxay had iyo jeer yihiin beddel weyn marka aad guriga ku haysato dhowr marti ah oo qado ama casho leh. Laakiin sidoo kale cunto fudud oo macaan laba jeer maalin kasta inta lagu jiro usbuuca, miyaadan oggolayn? Jeexitaannada badda ayaa ah kuwa aan ugu jeclahay xilliyadan, isku day isku -dubbaridkaas naaska la dubay oo leh basal iyo cherry oo aan maanta soo jeediyo.
Waxay qaadataa waqti aad u gaaban in la diyaariyo jajab yar oo la dubay oo foornada ku jira. Foornada ayaa sidoo kale qaban doonta inta badan shaqada. Waxaan kaliya yeelan doonnaa inaan ka taxadarnno inaan dhigno dhammaan maaddooyinka ku jira isha iyo kiiskan, marka lagu daro, of basal kari kari ka hor si loo hubiyo in waqtiga ay qaadanayso in kalluunka la kariyo uu noqon doono mid jilicsan.
Gilthead duban waa mid aad u fiican. Furaha tani waa la shiiday oo aan ku cadayno gudaha iyo dibaddaba ee naaska si uu u dhadhamo Wakhtiga karinta ayaa waliba saamayn ku yeelan doona; haddii aan aad u fogaano, waxaan halis ugu jirnaa in naasku qalalo. Ma ku dhiirranaysaa inaad ila karisid? Markaa waa inaad diyaarso salad si aad u dhammaystirto liiska
Gilthead bream oo la dubay oo leh basal iyo cherry waa saxan fudud, oo ku habboon in lagu raaxeysto dhammaadka wiigga ama loogu adeego martidayada kulan isu soo dhowaansho ah.
1 dahab ah (loogu talagalay 2)
1 basal casaan ah oo ku jirta julienne
Yaanyada cherry 16
1 qaado oo dhir jar jartey ah
Digsi qaboojiye, oo saliid leh, basbaas uga dhig siddeed daqiiqo ka badan kulayl dhexdhexaad ah.
Waxaan ka faa'iideysaneynaa waa waqti diyaarso mash. Si tan loo sameeyo, waxaan ku shaqeynaa toonta la shiiday, dhir, dunta saffron iyo qanjaruufo cusbo ah. Kadib, ku dar shaaha oo saliid ah iyo liin yar oo liin iyo walaaq.
Waxaan ku ridnaa nafaqada saxan ku habboon foornada iyo waxaan si fiican ugu subkaneynaa gudihiisa majado. Marka xigta, waan xirnaa oo waxaan u adeegsanaa mash -dhaafka si aan u fidino bannaanka.
Ku dar basasha basbaaska leh isha, xoogaa miira, iyo yaanyada. Sidoo kale, liinta oo cad cad.
Marka la sameeyo Waxaan ku ridnaa foornada foornada waxaan ku karineynaa 180ºC 12 daqiiqo. Kadib, waxaan furi karnaa naaska oo aan u oggolaannaa inuu dhammaystiro karinta.
Waxaan u adeegnaa gilthead la dubay basal iyo cherry kulul.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka Kalluunka » Gilthead bream oo la dubay oo leh basal iyo cherry
Kafeega Dalgona, kafeega fayras